AL Shabab oo dad ku laayay degaanka Mabokoni iyo Bakari Dondo ee Kenya - Muqdisho Online
Home Wararka AL Shabab oo dad ku laayay degaanka Mabokoni iyo Bakari Dondo ee...
AL Shabab oo dad ku laayay degaanka Mabokoni iyo Bakari Dondo ee Kenya
Sida ay sheegtay dowladda Kenya kooxda argagaxisada AL Shabaab ayaa ku dishay labo qof oo ka mid ahaa dadka deganka lagu magacaabo Msambweni. Al Shabaab ayaa horay ficiisghu jira dil iyo afduub ka gaystay degaankaasn.
Sidoo Al Shabaab ayaa sheegaty in ay dileen Omar Shehe oo ahaa Imaam Masaajidka degaanka Mabokoni iyo Bakari Dondo. Wararku waxa ay sheegayaa in imaamku uu ka mid ahaa dad ay Al Shabaab toogteen.
Hay’adaha amaanka dalka Kenya ayaa sheegay in ragga dilka geystay ay horay u sheegeen in ay isaga baxeen AL-shabaab laakiin ay si hoose ula shaqeynayeen. Wargeyska The Star ee dalka Kenya ka soo baxa ayaa baahiyay in raggaas ay shan jeer farriin u direen Imaamka iyo Ninka kale ugana digeen in ay u basaasaan Hay’adaha amaanka.
Farriintii ugu dambeysay ee loo diray labada qof ayaa u qorneyd “waxaan hubin doonaa in madaxiinna aan gooyno”,waxaana farriintaas loo diray Bishii June 7deedii sida ay sheegeen hay’adaha amaanka. Dadka degaanka ayaa sabtigii sheegay in dad Middiyo, Masaaro iyo Budad ku hubeysan ay dileen wadaadka iyo Ninka kale.
Laakiin dowladda Kenya ayaa sheegtay in labada qof oo si hoose ula shaqeynayay hay’adaha amaanka ay beegsadeen rag horay u sheegtay in ay ka baxeen AL-shabaab hayeeshee la shaqeysanayay. Ciidamada oo howlgal ka fuliyay degaanka uu dilka ka dhacay ayaa gacanta ku dhigay 10 qof oo la tuhmayo kuwaas oo lagu heysto in ay xiriir la leeyihiin Al-shabaab.
Previous articleWaa maxay xiriirka dhaqaale ee ka dhaxeeya Al Shabab & ganacsatada / hay’adaha –NGO? (Xog Xasaasi)
Next articleHaweenka J/land oo taageeray xildhibaanada cusub ee la dhaariyay (Daawo)